Muqdisho oo madaafiic leysku asqeynayo iyo Madaxda Dowlada oo Hotelo ku tamashleynaya | KEYDMEDIA ONLINE
Muqdisho oo madaafiic leysku asqeynayo iyo Madaxda Dowlada oo Hotelo ku tamashleynaya
Muqdisho(Keydmedia) Magaalada Muqdisho waxaa ka socda Dagaalo xiriir ah mudo ka badan 15 casho, waxaana dagaaladaasi ku dhintay in ka badan 230 ruux iyadoona ay ku dhaawacmeen 400 dad kor u dhaafaya.
Madaxda Dowlada KMG ah oo iyagu sheega in ay matalaan shacabka Soomaaliyeed waxa ay ka badin la yihiin khilaaf dhexdooda ah iyo waliba in safaro aan macno badan xanbaarsaneen ay ku tagaan dalalka Dunida.
Iminka waxaa ku nool oo ku tamashleynaya Grand Regency Hotel oo ku yaala Magaalada Nairobi wafdi uu hogaaminayo R.wasaare sharma'arke kaasoo ka kooban wasiiro, Xildhibaano iyo shaqaalo kale oo ka tirsan xafiiska R.wasaaraha.
Iyadoo tani ay jirto ayaa hadana dhanka kale waxaa xusid mudan in dagaan daga jidka Aadan Cadde oo aan fagaan badan u jirin xarunta madaxtooyada Soomaaliya ay ka soo dhacayaan xabado ay tuurayaan dhginacyada Dowlada ka soo horjeedaa taasoo mararka qaar dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaro Shaqaalaha Dowlada iyo ciidamada intuba.
Hotelkan Grand Regency waxa uu safka hore kaga jiraa Hotelada ugu qaalisan dalkaasi kenya isla markaana 24-kii saac waxa lagu jiiftaa Boqolaal Doolarka Maraykanka ah.
Dadka iyagu huwan magaca dowladnimo ee iska hilmaamay daryeelka shacabki ay matalayeen waxaa imin doonta dharaar la xisaabin doono misna la kala saari doona dhab iyo dhalanteed.